Saraakisha AMISOM oo ka hadlay Kabixitaankooda Somaaliya & Xaalka Amniga Somaaliya – Radio Daljir
Saraakisha AMISOM oo ka hadlay Kabixitaankooda Somaaliya & Xaalka Amniga Somaaliya
Noofember 8, 2017 9:18 b 0
Taliyaha Guud ee Ciidmaadda nabad ilaalinta AFrica ee AMISOM ayaa ka hadlay kabixitaankooda Somaaliya iyo Xaalka amniga somaaliya siduu noqon doono ,isago sharaxay sababaha ay uga baxayaan somaaliya.
“Go’aanka waxaa qaatay Golaha QM, balse waxaa waajib nagu ah inaan jarno in ka badan 1,000 Askar dhamaadka sannadkan. Sidaa darteed, micnaheeda waxaa weeye inaan haysano Tiro fiican oo meel kasta u dhaqaaqi kara, Kuwaasi oo aan oggolaan doonin in la soo galo meelaha laga baxo , Waxaan doonaynaa inaan Dib-u-habayn ku samayno Ciiddankeenna si ay awood ugu yeeshaan inay ku hawlgalaan si wacan”
Intii uu ku guda jiray shirkiisa jaraa’id ayuu sidoo kale ka hadlay howlgalka uu ku dhawaaqay dhawaan Madaxweyne Farmaajo waxa uuna sheegay in dhankooda ay howlgalkaas ka qeyb qaadan doonaan.
“Madaxweynaha waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga guuleysto Alshabaab. Madaxweynaha waxa inoo weydiiyey xilliga ay Ciiddanka AMISOM baxayaan, Madaxweynaha waxaa si cad uga go’an in laga guuleysto Alshabaab, Madaxasweynaha waxa uu samaynayaa waxa kasta oo uu awood sidii ay Ciiddankiisa ula dagaalamaan Alshabaab, Waxa uu qaaday Waddo dheer, si uu taageero uga helo Hoggaamiyayaasha Gobalka”
Madaxweyne Farmaajo oo Kulan Xasaasi ah la qaatay Xildhibaanadii Xaaf Mooshinka ka keenay
on Hogaamiye noocee ah ayay shacabka Puntland u baahanyihiin 2019? (dhegayso)Hogamiyaha hada joga ama cali xaaji warsame. Lakin ninki ale u qoran arkayna